कसले जित्ला जर्मन बुन्डेस लिगा ? | Hamro Khelkud
कसले जित्ला जर्मन बुन्डेस लिगा ?
एजेन्सी – झन्डै एक दशकपछि जर्मन बुन्डेस लिगाको उपाधि छिनोफानो अन्तिम लिग खेलमा हुँदैछ । शीर्षस्थानमा रहेको बायर्नलाई उपाधि जित्न मात्र १ अंक आवश्यक छ ।
उपाधि होडमा रहेका दुई टोली बायर्न म्युनिख र बोरुसिया डर्टमुन्डबीच मात्र २ अंकको फरक छ । बायर्नले आइन्ट्रयाक्ट फ्रान्कफर्टको सामना गर्दा डर्टमुन्डले बोरुसिया मोन्चेनग्लाडबाकको सामना गर्नेछ । डिसेम्बरमा बायर्नसँग ९ अंकको अग्रता लिएको डर्टमुन्डले अघिल्लो महिना बायर्नसँग ५-० ले पराजित भएपछि अग्रता गुमाएको थियो । पछिल्लो ६ सिजन लगातार लिग उपाधि जितेको बायर्न त्यस सिलसिलालाई निरन्तरता दिन चाहन्छ ।
डर्टमुन्डले इंग्लिस युवा स्टार जेडन सान्चोको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा सिजनभर उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ । तर मार्च र अप्रिलमा भएको ५ खेलमध्य एक खेलमा मात्र जित हासिल गरेपछि लय गुमाएको थियो । त्यसयता लयमा देखिएपनि बायर्नको चुनौती भने परास्त गर्न सकेको छैन । दुवै टोलीले पछिल्लो केहि साता अंक गुमाउनुले लिगको अन्तिम खेल रोमान्चक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
बायर्न र डर्टमुन्ड दुवैको विपक्षी टोली च्याम्पियन्स लिगमा स्थान बनाउने होडबाजीमा छन् । त्यसैले पनि दुवै खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक हुनेछ । डर्टमुन्डको प्रतिद्वन्द्वी ग्लाडबाक चौथो स्थानमा रहँदै समान अंक रहेको बायर लेभरकुसनभन्दा गोल अन्तरले माथि छ । बायर्नको विपक्षी फ्रान्कफर्ट यी दुई भन्दा २ अंकले पछाडी छ ।
उपाधिका लागि टोलीको प्रतिस्पर्धासँगै गोल्डेन बुटको लागि पनि दौड चलेको थियो । तर रोबर्ट लेवान्डोस्कीले २२ गोल गर्दै आफ्नो बलियो दावेदारी राखेका छन् । डर्टमुन्डका पाको अल्कासेर १८ गोल गर्दै दोस्रो स्थानमा छन् ।